Madaxweyne Gaas oo Booqday Dhaawacyada Askar uu Gaari la Rogmaday – Radio Daljir
Madaxweyne Gaas oo Booqday Dhaawacyada Askar uu Gaari la Rogmaday
Juunyo 21, 2015 6:23 b 0
Axad, Juun 21, 2015 (Daljir) _Madaxwaynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay 21-6-2015 Cisbitaalka weyn ee magaalada Garoowe ku booqday Dhaawaca askar katirsan Ciidanka Daraawiishta Puntland oo gaari ciidan uu kula dhacay deegaanka Buura-wadal ee Gobolka Sool.
Toban askari oo kamid ah Ciidanka uu gaarigu la dhacay ayaa shilkaasi ku dhintay halka laba iyo Toban kalana uu ka soo gaaray dhaawacyo kala Duwan.
Saraakiisha cisbitaalka ayaa madaxweynaha warbixin dheer ka siiyey xaaladda caafimaad ee ciidankaas, iyagoona sheegay in howlwadeenada caafimaadka ay ku howlan yihiin sidii ay gargaar caafimaad oo deg deg ah u siin lahaayeen.
Madaxwaynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka tacsiyeeyay Geerida naxdinta leh ee ku timi tobankaasi askari isagoona alle uga baryey in jana Fardowsa uu ka waraabiyo samir iyo iimaan buuxana ka siiyo eheladii,qaraabadii, shacabka Puntland, saraakiisha ciidanka iyo guutadii ay ka tirsanaayeen.
Madaxwayne Gaas ayaa sidookale mid mid ugu booqday Cisbitaalka weyn ee Garoowe laba iyo Tabanka askari ee dhaawacyadu ay ka soo gaaren shilkaasi dhacay,waxaana uu si deg deg ah amar ugu bixiyay in qaybtooda liidata ee aan dalka waxba looga qaban Karin loo qaado dalka dibadiisa si ay u helaan daryeel caafimaad oo dhamaystiran .
FAAH-FAAHIN: 10- kamid ah Askarta Punltand oo Shil Gaari ku Geeriyooday
Al-shabaab oo Weerar Culus ku qaadday xero Ciidan oo ay Leedahay Dowladda Somalia